आर्थिक – " कञ्चनजंगा News "
लगातार घटेको सुनको सुनको मूल्य आज पनि घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार
No Comments on लगातार घटेको सुनको सुनको मूल्य आज पनि घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार
काठमाडौ । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले ओरालो लागेर रु ९९ हजार तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९९ हजार ३०० मा कारोबार भएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९८ हजार ५०० छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९८ हजार ८०० थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १० ले घटेर रु एक हजार ३४० मा आएको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ८९९ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
यो पनि- चुनावी गतिविधि बढाउँदै दलहरू-आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले चुनावी गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन् । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेसँगै दलहरूको चुनावी अभियानले गति लिएको हो ।
भूगोलका हिसाबले देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिकासहित पाँचवटा पालिका रहेको कास्कीमा नेपाली कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन, नेकपा ९एमाले०सहित अन्य दल एवम् स्वतन्त्रबाट प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष एवम् सदस्यसहित कूल एक हजार ४९१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचनबाट कूल ३७० जना जनप्रतिनिधि जिल्लामा निर्वाचित हुनेछन् ।
चुनावलाई लक्षित गरी गठबन्धन दलका तर्फबाट घोषणापत्र तयारी गर्ने काम भइरहेको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० नेता एवम् घोषणापत्र निर्माण समितिका सदस्य विश्वप्रकाश लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
No Comments on प्रभु लाइफको आइपीओ किन्न तयार रहनुहोस्
काठमाडौं। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आइपीओ) मंसिर २९ गतेदेखि बिक्री खुल्ला हुने भएको छ। यसमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्मका लागि सेयर आवेदन दिन सक्नेछन्।
२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषका लागि पनि ५ प्रतिशत छुट्याएर बाँकी रहेको ५४ लाख कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने छन्।
कम्पनीले कर्मचारीलाई न्यूनतम ३०० कित्तादेखि माथि पद र कार्यानुभव तथा पदावधिको मापदण्ड बनाएर सेयर वितरण गर्ने तयारी गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण पौडेलले बताए। २६० जना कर्मचारी कार्यरत रहे पनि केही कर्मचारीहरु भने काम गरेको न्यूनतम अवधिको मापदण्डभित्र नपरेपछि सेयर पाउनबाट वञ्चित भएको पनि पौडेलले बताए।
सर्वसाधारणतर्फ भने बढीमा ५ लाख ४० हजार जनाले बढीमा १० कित्ता सेयर पाउने छन्। कम्पनीले समग्र वित्तीय अवस्था तुलनात्मकरूपमा कम जोखिमपूर्ण रहेको रेटिङ पाएको छ। इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा इक्राएनपी(आइआर बीबी पलस रेटिङ पाएको छ। प्लसले चिन्हले कम्पनीमा तुलनातम्क रूपमा जोखिम कम भएको बुझिन्छ भने माइनस चिन्हले जोखिम बढी रहेको बुझिन्छ।
यतिबेला सेयर बजारले नयाँ उचाई लिएको छ। कुनै समय आइपीओ नै बिक्री नहुने जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा समेत मागभन्दा बढी आवेदन पर्न थालेकाले कम्पनीको सेयर आवेदन पुस २ गतेभित्रै बन्द हुने अधिक सम्भावना छ। ९० वटा शाखा र उपशाखा कार्यालय रहेको कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकको २० लाख संस्थापक कित्ता सेयर स्वामित्व छ।
साीग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १७ लाख ७७ हजार ५०० कित्ता, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको १४ लाख कित्ता, प्रभु ग्रुपको १० लाख कित्ता, प्रभु म्यानेजमेन्टको ७ लाख कित्ता, प्रभु क्यापिटलको ५ लाख कित्ता, विराटकुमार श्रेष्ठको ३ लाख ५० हजार कित्ता, देवीप्रकाश भट्टचनको ३ लाख ४९ हजार ५०० कित्ता, सुशील थापाको ३ लाख कित्ता, सनराइज होल्डिङको ३ लाख कित्ता, वीरेन्द्रनारायण श्रेष्ठको २ लाख कित्ता, शिवकुमार श्रेष्ठ, गोकुल भण्डारी, आइक्यापिटल र एबी होल्डिङको पनि समान २र२ लाख कित्ता संस्थापक सेयर छ।
त्यसैगरि महेन्द्रकुमार गोयल र स्वरुप गुरुङ कोनेको समान १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर छ भने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आत्माराम घिमिरे र सञ्चालक सुभाष आमत्यको समान १र१ लाख कित्ता संस्थापक सेयर स्वामित्व छ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १३ लाख खुद नाफा गरेकोमा २०७४/७५ मा ५ करोड २४ लाख, २०७५र७६ मा ८ करोड १६ लाख र २०७६/७७ मा ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (अपरिष्कृत) खुद नाफा गरेको छ। आगामी ३ आर्थिक वर्षमा २०७७/७८ मा १३ करोड ५१ लाख, २०७८/७९ मा २० करोड ८२ लाख र २०७९/८० मा २६ करोड २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
अहिले औसत ४ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी आगामी ३ वर्षभित्र १३ रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अहिले प्रति सेयर नेटवर्थ ११२ रुपैयाँ रहेकोमा आगामी ३ वर्षभित्र करिब १४० रुपैयाँ पुर्‍याउने र नेटवर्थ प्रतिशत ९.४३ प्रतिशत पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ।
No Comments on लकडाउनमा पनि चलिरहेको उद्योग, टपरी उद्योग
कैलाली । झण्डै सात आठ महिनासम्म निरन्तर रुपमा चलिरहेको लकडाउनले गर्दा देशका प्राय सबै खालका उद्योग र व्यवसायहरु बन्द भएको स्थिति थियो । तर धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ स्थित एचगाउँमा रहेको भावना पुलामीमगरको फूलबारी दुना–टपरी उद्योगमा टपरी बनाउने व्यस्तता बढेको छ ।
सुरुमा टपरी कोही किन्न मान्दैनथे तर अहिले माग निकै छ, भावनाले भनिन, “लकडाउनमा सबै कारोबार लक भए हामीले भने त्यो बेलासमेत धेरै टपरी बनायौँ । अहिले फेरि दशैँ, तिहारमा चाहिने दुना–टपरी बनाइरहेका छौँ । ” उनले पुराना कुरा सुनाउँदै भनिन, “तीन वर्ष टपरीका बारेमा प्रचार गरिसकेपछि अहिले टपरी उद्योगले कमाइको लय समातेको छ । फाइबरभन्दा अर्गानिक सालको पातको टपरीमा खाने कुरा खाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने सम्झाउन सकेपछि अहिले माग पु¥याउनै गाह्रो छ । ” उनका अनुसार आजभोलि मःम, चाउमिन, अरू खालका नास्ता, खानाका लागिसमेत टपरी प्रयोग हुने गरेको छ ।
सुरुमा आफूलाई थोरैले मात्र पत्याएको बताउँदै उनले काठमाडौँ, डडेल्धुरा, महेन्द्रनगर, धनगढी र फूलबारीका विभिन्न व्यवसायीले अहिले आफ्नो टपरी लैजान थालेको बताईन् । विदेशमा कार्यरत श्रीमानले समेत ‘टपरीसितै बिहे गर, मैले डिभोर्स गरेँ’ भनेर दुईपटक फोनमा भनेको स्मरण गर्दै भावनाले आफू महोत्सवहरूमा उद्योगीका रूपमा सम्मानित हुन थालेपछि भने श्रीमान् सकारात्मक भई नेपाल आएर घरमा म अरू नै व्यवसाय गर्छु भन्न थालेको उनको भनाई छ ।
“त्यसो गर्नुभयो भने म अर्को ठाउँमा उद्योग खोल्छु । म अब यो व्यवसायमा भिजिसकेकी छु,” उनले बताएको रहेछिन् ।वातावरण र स्वास्थ्यमा कुनै खालको असर नपार्ने भएपछि आजकल जताततै टपरी रुचाउन थालिएको छ । त्यसैले बजारको समस्या पनि छैन । त्यसै हुँदा पहिलो वर्ष घाटा नभएको, दोस्रोमा दुई लाख जति बचत भएको र तीन÷चार लाखको टपरी त गोदाममै रहेको उनको भनाई रहेको यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
No Comments on अब बैंकबाट बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण झिक्न पाइने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था !
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४७ सनराइज होम्समा अवस्थित नेपाल डेन्टल एसोशियशनसँग बैंकिङ्ख सेवाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ ।
यस सम्झौता अन्तर्गत नेपाल डेन्टल एसोसियशनसँग आवद्ध सदस्यहरु तथा सदस्यहरुसँग आवद्ध संस्थाका कर्मचारीहरुलाई यस डेभलपमेन्ट बैंकका बिभिन्न बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुने साथै बिना धितो रु. १५ लाख सम्मको प्रोफेशनल कर्जा प्रदान गरिने छ । यस कर्जाअन्तर्गत कर्जावालालाई रु एक लाख सम्मको कोभिड–१९ इन्स्योरेन्स निःशुल्क प्रदान गरिने छ ।
बैंक र एसोसियशन बीच आयोजित एक कार्यक्रममा सोसम्बन्धी सहमती पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतसुयोग श्रेष्ठ र नेपाल डेन्टल एसोसियशनका अध्यक्ष डा. प्रविन्द्र अधिकारले हस्ताक्षर गरे । सांग्रिला डेभलपमेन्टका विभिन्न शाखाहरुबाट यो सेवा उपयोग गर्न सकिने
काठमाडौँ – सरकारले नियमित उडान सङ्ख्या थप गर्नेभएको छ । अहिले दैनिक दुईवटा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेकामा वायु सेवा कम्पनीले थप उडान माग गरेमा अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।
No Comments on राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित राज्यबाट सुविधा लिने सबैको तलब रोकियो
No Comments on विनोद चौधरीले गैह्रकानुनी ढंगले विदेश लागेको एक लाख डलर नेपाल राष्ट्र बैंकले फर्कायो
No Comments on भुरा बेचेर दश लाख आम्दानी
काठमाडाैं : कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ बन्साहाका पल्टु चौधरीले वार्षिक रु २० लाख मूल्य बढीका माछाका भुरा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ । माछाका भुरा उत्पादन र मजदुरको खर्च कटाएर रु १० लाख चौधरीले आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ । चौधरीले सञ्चालन गरेको ह्याचरीमा यस वर्ष पाँच करोड विभिन्न प्रजातीका माछाका भुरा उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये तीन करोड माछाका भुरा बिक्री भएका छन् । ह्याचरीमा उत्पादन भएका माछाका भुरा सुदूरपश्चिमका सात जिल्लासहित बर्दियासम्म बिक्री हुने गरेका छन् । माछापालकले ह्याचरीमै पुगेर माछाका भुरा खरिद गरी लग्ने गरेका छन् ।
चौधरीको ह्याचरीमा कमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्भर कार्प, विगेट, रहु, नैनी, भाकुरलगायत जातका माछाका भुरा उत्पादन हुने गरेका छन् । “ग्राहकले थोरै मिहिनेतमा पोखरीमा राख्दा धेरै तौल हुने, छिटो बढ्ने जातका माछाका भुराको माग गर्दै आएका छन्”, चौधरीले भन्नुभयो, “ग्राहको मागअनुसार विभिन्न जातका माछाका भुरा उत्पादन हुँदै आएको छ ।” उहाँका अनुसार ग्राहको मागकै आधारमा यस बर्ष पंगासिस, मांगुर र रुपचन्द्र जातका नश्ल सुधारका लागि २०४ माउ माछा पालिएको छ ।
यसैगरी नश्ल सुधार गरिएका कमन, ग्रास, सिल्भर र विगेटलगायत चार जातका २०० माउ माछा पालिएको छ । गत वर्ष ४०० नश्ल सुधार गरिएका माछाबाट भुरा उत्पादन गरिएका छन् । “माउ माछाबाट ह्याचरीमा उन्नत जातका माछाका भुरा उत्पादन गरी माछापालक किसानलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ”, चौधरीले भन्नुभयो, “ग्राहकले छिटो बढ्ने र बजारमा राम्रो दाम पाइने माछाका भुरा रोज्ने गरेका छन् । सोही आधारमा भुरा उत्पादनमा लागेका छौँ ।” चालु आवको हालसम्म चौधरीले सञ्चालन गरेको ह्याचरीबाट एक हजार २०० जना माछापालकले माछाका भुरा खरिद गरी लगेका छन् ।
“माछापाल किसान बढ्दै गएकाले ह्याचरीमा माछाका भुराको उत्पादनसमेत आउँदा वर्ष बढाउने तयारीमा लागेका छौँ”, चौधरीले भन्नुभयो, “माछापालनप्रति स्थानीय किसानको आर्कषण बढ्दै गएकाले यही अवस्था रहे अबको दुई वर्षमा कञ्चनपुर माछामा आत्मनिर्भर हुन्छ ।” दुई बिघा १० कठ्ठा जग्गा आफ्नै स्वामित्वको र दुई बिघा अरुको लिजमा लिएर चौधरीले ह्याचरी सञ्चालन गरेका छन् ।
ह्याचारीमा माछाका भुरा उत्पादन गर्दै आएका चौधरीले भन्नुभयो, “ह्याचरीमा माछाका भुरा उत्पादन भएपश्चात ग्राहकलाई ढुवानीका साधन पाउन समस्या छ । ढुवानीका साधन पाए पछि ह्याचरी सञ्चालन गरेको ठाउँसम्म सडकको बिग्रदो अवस्थाका कारण पु¥याउँनै समस्या छ ।” सडकको अवस्थामा सुधार भए अझै बढी ग्राहक माछाका भुरा खरिद गर्न आउने उहाँको भनाइ छ ।
गाईबस्तुलाई सोत्तर बनाउने तीतेपातीको भुवा जापान निर्यात
No Comments on गाईबस्तुलाई सोत्तर बनाउने तीतेपातीको भुवा जापान निर्यात
काठमाडौँ । गाईबस्तुलाई सोत्तर बनाउने तीतेपातीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा छ । त्यो पनि जापान निर्यात गरेर । तीतेपातीलाई प्रशोधन गरेर १२ वर्षदेखि जापान निर्यात गर्दै आएका एक व्यवसायीको कमाइ प्रतिरोपनी ५० हजार रुपियाँ रहेको बताइएको छ ।
१२ वर्षदेखि सुुकेको तीतेपातीको पातबाट एक प्रकारको भुवा ‘मोक्जा’ बनाएर जापान निर्यात गर्दै आउनुभएका यामासो प्रालिका निर्देशक ईश्वरराज बलामीको उद्यम फस्टाएको छ । उहाँले आफैँले मात्र नभई स्थानीयलाई समेत तीतेपाती आम्दानीको स्रोत बनाइदिनुभएको छ ।
नागार्जुन नगरपालिका–४, सरनपुरमा स्थापना गरिएको यामासो प्रालिले निर्यातका लागि प्रशोधन गर्न कच्चा पदार्थका रूपमा तीतेपातीको सुकेको पात प्रतिकेजी ५० रुपियाँमा किनिदिन्छ ।
अकुपञ्चरिस्टसमेत रहनुभएका बलामीले सन् १९९४ मा अकुपञ्चरसम्बन्धी तालिमका लागि उहाँ जापान जाँदा तीतेपातीको महत्व थाहा पाउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो,अकुपञ्चरको तालिम लिँदा उपचार पद्धति मोक्जुवेसन, त्यसमा प्रयोग हुने जडीबुटीसम्बन्धी पनि जानकारी दिने गरिन्थ्यो ।
त्यस उपचार पद्धतिमा बिरामीको उपचार गर्दा मोक्जाको प्रयोग गर्ने विधि र मोक्जाको उत्पादनसम्बन्धी पनि बलामीले जानकारी लिनुभयो । तीन महिनाको तालिमपछि स्वदेश फर्केर सो उपचार पद्धतिसँग बलामी जोडिनुभयो ।
हाल दिव्य सञ्जीवनी हस्पिटलमा सेवारत उहाँले जापानमा सिकेको सीपमध्ये मोक्जाका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तीतेपाती नेपालको प्रायः सबै भूभागमा पाइन्छ भने यसको उत्पादन किन नगर्ने रु भनेर काम थालेको बताउनुभयो ।
त्यसका लागि जापानी साथीभाइलगायत विज्ञहरूको सहकार्यमा वैदेशिक ऋणको स्वीकृति गराएर नेपालमा मोक्जाको उत्पादन थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यामासोमा हाल प्रत्यक्ष १५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा पात टिपेर सुकाएर बेच्ने धेरैले आम्दानी गरिरहेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
तातोपानी भन्सारबाट एक अर्ब ६० करोड राजश्व संकलन
No Comments on तातोपानी भन्सारबाट एक अर्ब ६० करोड राजश्व संकलन
सिन्धुपाल्चोक – नेपाल–चीनको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५८ हजार ९७९ रूपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा राजश्व सङ्कलन गर्न वार्षिक लक्ष्य नतोकिएको हुँदा उक्त राजश्व भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर कृषि सुधार तथा सडक सुधार शुल्कलगायत शीर्षकमा सङ्कलन भएको तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि सो नाका पनि २०७६ माघ १६ गतेदेखि बन्द भई चैत २६ गते मात्र पुनः सुचारु भएको थियो ।
सो नाका भएर चीनबाट औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, फलफूल, विद्युतीय सामान, तयारी पोशाक तथा जुत्तालगायत सामान आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।